Great Myanmar Website Creator | Newworth ( myanmar website company)
Search forawebsite company? Create Your Website With Us.
Warmly Welcome To Newworth
phone: 01-1221275,09 798410576
Requirement to buildawebsite
New worth Co.,Ltd သည် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ လူကြီးမင်း တို့၏ စီးပွားလုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော Website များ၊ Web application များ နှင့် အခြား IT ၀န်ဆောင်မှု များကို စိတ်တိုင်း ကျစေရန် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေပါသည်။ ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းမှာ ရွှေဂုံတိုင် မီးပွိုင့် ရှိ ယုဇန တာဝါ ဒုတိယထပ် အခန်း (၂၀၅) တွင်တည်ရှိ် ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင် ကျွမ်းကျင် programmer များ၊ ကျွမ်းကျင် designer များဖြင့် customer များစိတ်ကြိုက် product များ ကို ထုတ်လုပ် ပေးနေပါသည်။ နံနက် ၉ နာရီမှစ၍ ညနေ ၆ နာရီအထိ ရုံး အလုပ်ချိန် အတွင်း ရုံးခန်းသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် IT ၏ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါမှုကို သိမြင်လာကြသည်နှင့.....	More
သင်သည် ယခု အကြောင်းအရာကို ဖတ်နေပြီ ဆိုလျင် သင်သည် ခေတ်မှီသော အတွေအခေါ် များရှိနေပြီး။ website တစ်ခု၏ အားသာချက် များကို သဘောပေါက်နေပြီ ဟု ယူဆမိပါသည်။ ထို့ကြောင့် website တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီး သော အချက် များကို ရှင်းပြ ပေးပါမည်။Website တစ်ခု အတွက် အလိုအပ်ဆုံး အရာကတော့ သင်၏ ပထမဆုံး ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့ customer များကို ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ထိုသို့ ဆွဲဆောင်နိုင်၇န် သင်ကိုယ်တိုင် ရေးသား ထားသော စာသား (contents) များသည် အလွန်အရေး ကြီးလှပေသည်။ သင်သည် အကောင်း ဆုံးသော website ရေးဆွဲ ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်း (web service provider) နှင့် အပ်နှံ ရေးဆွဲသော်လည်း ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ပါ။ အမှန်တကယ် အောင်မြင်သော website တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့အတွက် .....	More
ယခုအခါတွင် လုပ်ငန်းအများစုသည် IT၏အရေးပါမှုကို သိရှိလာကြပြိး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု ကြော်ငြာခြင်း တို့ကို online မှတဆင့် လုပ်ဆောင် လာကြ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းများသည် ကိုယ်ပိုင်webstie လုပ်ဆောင်ရန် အထူး စိတ်ပါဝင်စား လာကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့် အမျှ website တည်ဆောက် ပေးသော လုပ်ငန်းများ မြောက်များစွာ ပေါ်ထွက်လာ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် website ပြုလုပ်လိုသော လုပ်ငန်းရှင် များမှာ စိတ်ချယုံ ကြည်ရသော ၀န်ဆောင်မှုပေးမည့် လုပ်ငန်းကို အသေအချာ ရှာဖွေ ကြရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ New Worth အနေ ဖြင့် လူကြိးမင်း တို့အတွက် ယုံကြည် စိတ်ချရသော ၀န်ဆောင်မှု၊ သက်သာသော ဈေးနှုန်း၊ လှပသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် စောင့်မျှော် လျက်ရှိပါသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြ.....	More
New Worth ကိုဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်သလဲ။
New Worth သည် သင်၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ မည်ကဲ့သို့သော website မျိုးကို ရွေးချယ်သင့်သည်ကို ကြို တင်သိရှိ အကြံပေးနိုင်ခြင်း။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်နှင့် ကိုက်ညီမျှတသော ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထား ခြင်း သေသပ် လှပသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဒီဇိုင်းများ ကို သင့်စိတ်ကြိုက် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း။ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော CMS website များ ကို ၀ါရင့် developer များမှ နိုင်ငံတကာ စံချိန်မှီ မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရွေးဆွဲပေးနိုင်ခြင်း။ Security မြင့်မားသော US server ဖြင့် အသုံးပြုထားသော ကြောင့် အမြန်နှုန်း နှင့် စိတ်ချရမှုကောင်းမွန်ခြင်း။ ရေးဆွဲ ပေးထားသော website များကို အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းမှု အားကောင်းခြင်း။ Customer များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အပြည့်.....	More
New worth မှ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) လူကြီးမင်းတို့ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော website များကို အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုပေးရာတွင် လူကြီးမင်းတို့အတွက် အစမှအဆုံး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ – Domain ကူညီရွေးချယ်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူပေးခြင်း – Design ကို လည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း – Facebook […]
Internet ကို အသုံးပြုပြီး business ကို ချဲ့ထွင်လိုသူများအတွက် visitor နှင့် business အကြား ဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်မှုများစွာ ပါဝင်သော web application များကို New Worth မှ တာဝန်ယူရေးဆွဲပေးနေပါသည်။ ယ ခုအခါ internet website များသည် information များ ပေးထက် သာလွန်စွာ user […]
လူကြီးမင်းတို့ ၏ website ကို ပြိုင်ဘက်များအကြား လူသိအများဆုံးဖြစ်အောင် SEO service ကို ရယူလိုက်ပါ။ SEO ဆိုသည်မှာ search engine optimization ကိုဆိုလိုသည်။search engine ဆိုသည်မှာ လူသိအများဆုံးဖြစ်သည့် Google, Yahoo နှင့် Bing စသဖြင့် ဖြစ့်ပါသည်။ Internet user များကို လေ့လာသောအခါ အများစုသည် […]
လူကြီးမင်းတို့အတွက်လုပ်ငန်း အတွက်လိုအပ်သော android mobile application များကို စိတ်တိုင်းကျဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ Android platform သည် mobile သုံးစွဲသူများ၏ ကြီးမားသော ဝေစုကိုရရှိထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် android သည် လူသုံးအများဆုံးသော mobile platform ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် mobile မှတဆင့် အသုံးပြုလုပ်ဆောင် နိုင်ရန် ပိုမိုမျှော်လင့်လာကြသည်။ ထို့ကြောင် web […]
Facebook သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးအများဆုံး နှင့် အလျင်မြန်ဆုံး ထိုးဖောက်ပေးနိုင်သော advertising media တစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook ကို လူကြီး ကလေး အားလုံးက သိနေကြပြီး ဖြစ်သလို အများစုကလည်း အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။ စီးပွာရေးလုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါကလည်း facebook fanpage ပြလုပ်လာကြသည်။ Facebook သည် လူနေမှု ဘ၀၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် facebook […]
R.J Pro Services
Saw MO Tea Leaf
Asia One Myanmar
Stephouse (Japan Project)
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ၂၀၁၄
nw unit converter
အလှအပကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ မတူညီတဲ့ လူများမှာ မတူညီသော အတွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။
Marketing manager , Newworth
" A journey ofathousand miles begins withasingle step. "
မိုင်ပေါင်းများစွာသော ခရီးတစ်ခုကို ခြေတစ်လှမ်းဖြင့်သာ စတင်ပါ။
Managing director , Newworth
အသိပညာ ဗဟုသုတသည် သင့်အတွက် စွမ်းအား တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Director , Newworth
Phone : 01-1221275, 09 799839047, 09 798410576